Researchlọ ọrụ nyocha ọhụụ na India ga-elekwasị anya na mmepe Maps na atụmatụ obodo | Esi m mac
N'oge na-adịbeghị anya, anyị gwara gị otu Apple siri gosi dịka akụkọ ndị na-adịbeghị anya na ọ na-eme atụmatụ imeghe ụlọ ọrụ nyocha na mmepe na Hyderabad (India), tinyere ụdị ndị ọzọ buru ibu dịka Microsoft na Google nke nwerelarị ọrụ ha n'ebe a. Eziokwu a na-egosi na Apple na-anwa ịgbasa mpaghara na mba a ma e wezụga mepee oru ohuru.
Ugbu a, enwere ozi kwuru na a ga-eji ntinye rụọ ọrụ ọhụrụ atumatu ahia na mpaghara yana mmepe nke maapụ Apple nke ka nọ n’azụ onye na-asọ mpi ya, ya bụ, Google Maps.
Akwụkwọ akụkọ India Times bipụtara nkwupụta sitere na Apple nke ha kwuru ihe ndị a:
Anyị na-atụle imeghe ọhụrụ ebe mmepe na Hyderabad nke ga-abụ ebe obibi karịa ndị ọrụ Apple 150 iji kwado mmepe maapụ. A ga-enwekwa ohere n'ọfịs maka ọtụtụ ndị mmekọ ga-akwado anyị n'ime mbọ anyị kacha nwee na mpaghara.
Apple ka na-eche mkpesa yana kwa nkwado gọọmentị. iji rụọ ọrụ na Mpaghara Akụ na ụba API na India, mgbe nke a gasịrị ụlọ ọrụ ga-edebanye aha na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Na ntinye ego nke nde dolla 25 na oghere nke ihe dika 28.000 square mita na ogige WaveRock, amabeghị ma ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ohere zuru ezu na ụlọ dị na ogige ahụ ma ọ bụ na ha ga-abanye na mkparịta ụka na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ala Tishman Speyer maka azịza ahaziri ahazi na mpaghara nke abụọ nke ogige ahụ, nke ikpeazụ bụ yikarịrị.
Facilitylọ ọrụ Hyderabad ga-abụ ụlọ ọrụ nyocha na mmepe nke Apple na India, na-esonyere ndị ọzọ ebe asaa na mpụga U.S.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Centerlọ ọrụ nyocha ọhụụ na India ga-elekwasị anya na mmepe Maps na atụmatụ obodo
Anapụta: a ngwugwu tracker, soro gị iwu si gị Mac